Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - အထီးကြွက် (2010) အတွက် medial prefrontal cortex အကြောင်းမရှိ maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုတွေ့ရှိရပါသည်
အဆိုပါ medial prefrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက် (2010) တွင် maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေ
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 ဇွန် 15; 67 (12): 1199-204 ။ EPub 2010 မတ်လ 26 ။
Davis က JF, လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် M က, di Sebastiano AR, ဘရောင်း JL, Lehman MN, Coolen LM.
ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, စင်စင်နာတီ, စင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, အမေရိကန်ဦးစီးဌာန။
သူတို့ maladaptive ဖြစ်လာတစ်ချိန်ကအပြုအမူတွေကိုတားစီးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအများအပြားစိတ်ရောဂါရောဂါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့် medial prefrontal cortex (mPFC) အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးတဲ့အလားအလာဖျန်ဖြေအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါ mPFC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တားစီးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်လက်ရှိလေ့လာမှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အထီးကြွက်များကိုသုံးပြီး, မိတ်လိုက်တားစီးဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စွမ်းရည်၏စကားရပ်အပေါ် mPFC ၏ infralimbic နှင့် prelimbic ဒေသများ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသုတ်ရည်ထိ-ဆက်ပြောပါတယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တဲ့ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
Medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လုံးဝလိင်-ခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ lesioned မိတ်ဆက်လက်နဂိုအတိုင်းအထီးတိရိစ္ဆာန်များသာ 22% အတွက်ရရှိလာတဲ့, mPFC နဂိုအတိုင်းအထီးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတ်ရည်ထိဆီသို့ကြံ့ခိုင်အပြုအမူတားစီးဖို့မတူဘဲ, မိတ်ဆက်။ သို့သော် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်ကဤကိုတွေ့ရှိရပါသည် lithium chloride တို့အဘို့အဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုသို့မဟုတ် sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်မပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, lithium chloride တို့အဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်တစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းရှိကြ၏။
လက်ရှိလေ့လာမှုအရ mPFC ကိုတွေ့ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့၏အပြုအမူ၏ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များဖြင့်အသင်းအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများအရလိင်ဆုလာဘ်ကိုရှာဖွေခြင်းကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ compulsive လိင်အပြုအမူသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူရောဂါပိုးကူးစက်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ဤအချက်အလက်များသည် Impulse control disorders ၏အခြေခံဘုံရောဂါဗေဒကိုပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါ medial prefrontal cortex (mPFC) ကစိတ်ခံစားမှု arousal ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအဖြစ်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (အပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏များစွာကိုပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်1-5) ။ ဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (ကအာရုံခံအဆိုပါ mPFC ၏ဖွဲ့စည်း circuit ကို, amygdala နှင့် striatum ကထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်6) ကို mPFC ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ "ထိပ်ဆုံး-Down" controller ကို (အဖြစ်ပြုမူသော7,8) ။ ဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဗဟိုအင်္ဂါရပ် (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ "တုံ့ပြန်မှု-ရလဒ်ကို" ဆက်ဆံရေးကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါသည်9) ။ အကျိုးဆက်များရှုံးသောအခါဖြစ်လာမယ့်အမူအကျင့်အရေးယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါဤနည်းအတွက်ဤလုပ်ရပ်များ၏ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေပါသည်။ (ဤအပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူလိုက်လျောညီထွေမှု, ဤတုံ့ပြန်မှုနဂိုအတိုင်း mPFC function ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်8, 10) ။ သူတို့ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ချိန်ကအပြုအမူလုပ်ရပ်များပြောင်းလဲပစ်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (စွဲလမ်းမမှန်အမျိုးမျိုးမှဘုံတစ်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်11-15).
ကြွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု-ရလဒ်ကိုဆက်ဆံရေးသုတ်ရည်ထိပန်းတိုင် (အောင်မြင်ရန်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ရသောသဘာဝဆုလာဘ်-based အပြုအမူဖြစ်ပါသည်16) ။ သို့သျောလညျးအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု lithium chloride တို့ (; 17, 18 LiCl) နဲ့တွဲသောအခါ copulating ကြဉ်ရှောင်။ mPFC လှုပ်ရှားမှု (ကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်19-25) နှင့်လူသားမြားသညျ (26) ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် mPFC ၏အတိအကျအခန်းကဏ္ဍမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါနှင့်သုတ်ရည်ထိ-ဆက်ပြောပါတယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တဲ့မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆီသို့ဦးတည်အပြုအမူတားစီး၏ဝယ်ယူအပေါ် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖို့ဖြစ်တယ်။ ဤအငျဒသေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများသို့ပရောဂျက်ပြပြီအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည် (က, infralimbic (IL) နှင့် mPFC ၏ prelimbic (PL) အရေးပါပါဝင်သည်20) ။ နဂိုအတိုင်း mPFC function ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပုံမှန်စကားရပ်ဘို့မလိုအပ်ပါသောဤလေ့လာမှုပြပွဲကနေရလာဒ်။ အဲဒီအစားရလဒ်ကဒီအပြုအမူဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်တစ်ချိန်က mPFC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆီသို့ဦးတည်အပြုအမူတားစီး၏ကွပ်မျက်ထိန်းညှိသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
Harlan ဓာတ်ခွဲခန်းများ (Indianapolis) မှရရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (250-260 ဂရမ်) Sprague Dawley ကြွက်တစ်ပြောင်းပြန်အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာတခုတခုအပေါ်မှာသူတွေဟာသက်ရောက်စေခန်း၌တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည် (12: 12 ဇ, 10 pm တွင်ချွတ်ထွန်း) 72 ၏အပူချိန်မှာ F ကို°။ အစားအစာနှင့်ရေအားလုံးအချိန်များတွင်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ Ovariectomized, အီစထိုဂျင် (5% 17-beta-estradiol benzoate နှင့်အတူ SC silastic ဆေးတောင့်) နှင့်အဓိကချို့ယွင်း (နှမ်းဆီ 500 ml အတွက် SC ဆေးထိုး 0.1 μg) ရစေတယ်အမျိုးသမီး Sprague Dawley ကြွက် (210-225 ဂရမ်) အားလုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, သော စတင်ခဲ့သည်လေးနာရီအမှောင်ကာလ၏စတင်ခြင်းနှင့်အပြုအမူပြီးနောက် rectangular Plexiglas စမ်းသပ်လှောင်အိမ် (60 × 45 × 50 စင်တီမီတာ) နှစ်အောက်မှိန်အနီရောင် illumination အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ, အနောကျပိုငျးအွန်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ၏တက္ကသိုလ်ကအတည်ပြု, နှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သော NIH နှင့် CCAC လမ်းညွှန်ချက်တညီတည်းခဲ့ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များ (1 / ကီလိုဂရမ် Ketamine နှင့် 87 / ကီလိုဂရမ် Xylazine မောင်မောင်) တစ်ဦး 13-ml / ကီလိုဂရမ်ထိုးနှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ခွဲစိတ်ဦးခေါင်းခွံဖော်ထုတ်ခဲ့, တစ်ဦး stereotaxic ယန္တရား (Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA USA) ၌ထားကြ၏နှင့်တွင်းတစ် dremmel လေ့ကျင့်ခန်း (Dremmel, USA) ကို အသုံးပြု. ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များအထက်တွင်တူးခဲ့ကြသည်။ Ibotenic အက်ဆစ် (0.25μl, PBS အတွက် 2%) အောက်ပါတစ်ဦး1.5μl Hamilton ကပြွတ်သုံးပြီး5မိနစ်ကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနား dorsoventral သြဒီနိတ်နှစ်ခုထိုးသုံးပြီးမြန်မာနိုင်ငံသထုံမွှန်းခံခဲ့ရ Bregma (အလျားလိုက်ညှိပြီးဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူ) မှဆွေမျိုးကိုသြဒိနိတ်: PL နှင့် IL သည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်: AP = 2.9, ML = 0.6, DV = -5.0 နှင့် -2.5 ။ အတုအယောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တူညီသောနည်းလမ်းများသုံးပြီးဖျော်ဖြေပေမယ့်မော်တော်ယာဉ် (PBS) ထိုးဆေးကိုအသုံးပြုပြီးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ 7-10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
PL နှင့် IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြိုတင်ခွဲစိတ်ဖို့လိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ်ကုသအောက်ပါလေးပတ်ဆက်တိုက်စုစုပေါင်းအဘို့, တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုသည်အထိတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကိုအတွက်ကွာခြားချက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ mount မှ latency, intromission, သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, ဘယ်အရာမှမပါဘဲနှင့် intromissions ၏နံပါတ်များ) အချက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်နှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ Post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်အားလုံး 5% အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ Fisher PLSD စမ်းသပ်မှု, အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ဓာတ်လှေကား Plus အားဝင်္စမ်းသပ်မှု
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္ (EPM) အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုစမ်းသပ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အောက်ပါငါးပတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ EPM ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Plexiglas ထဲကကိုဖန်ဆင်းပြီးအပေါငျးလက်ခဏာများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်စင်တာနယ်ပယ်တွင်ထံမှတိုးချဲ့တန်းတူအရှည်လေးလက်နက်ပါဝင်သည်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝင်္နှစျယောကျလက်နက်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှပွင့်လင်းခဲ့ကြနှင့်ဝင်္၏အခြားနှစ်ဦးကိုလက်ရုံးလက်မောင်းတစ်ခုလုံးကိုအရှည်တစ်လျှောက်တွင်ဆန့်ကြောင်းမှောင်မိုက်ဘက် (မြင့်သော 40cm) ကပူးတွဲခဲ့ကြသည်။ အလယ်မှာဧရိယာအကြားနယ်နိမိတ်နှင့်လက်နက်ပုဝင်္၏အလယ်တွင်ထံမှ 12cm တည်ရှိသောလက်နက်အပေါ်အဖြူအစင်းများကသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ EPM စမ်းသပ်မှုမှိန် illumination အောက်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်မှောင်မိုက်ကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက်, 1-4 နာရီ။ အတုအယောင်နှင့် lesioned တိရိစ္ဆာန်များအကြားကွာခြားချက်များ 5% အရေးပါမှုအဆင့်ကျောင်းသား t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
အထီးကြွက်ကြိုတင်တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်အတုအယောင်ခွဲစိတ်ကုသရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရဖို့သုံးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ သုံး Pre-ခွဲစိတ်မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေထဲကအနည်းဆုံးနှစ်ခုကာလအတွင်းတစ်သုတ်ရည်လွှတ်ပြသကြောင်းတိရစ္ဆာန်များဤလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျပန်းလေးစမ်းသပ်အုပ်စုများအပေါ်ပိုင်းခွဲခဲ့ကြသည်: Sham-LiCl, တွေ့ရှိရပါသည်-LiCl, Sham-ဆားနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်-ဆား။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်အတုအယောင်ခွဲစိတ်ပြီးခဲ့သည့်သင်တန်းပြီးနောက်3ရက်ပေါင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အေးစက်အစည်းအဝေးများစတင်ခဲ့မတိုင်မီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခွဲစိတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအတုအယောင်၏အခြားတစ်ဝက်နှင့် lesioned အထီးထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဆားကိုချက်ချင်းအောက်ပါမိတ်လိုက် (Sham-ဆားကိုလက်ခံရရှိချိန်တွင်အေးစက်အစည်းအဝေးများအတွင်းအတုအယောင်၏တစ်ဝက်နှင့် lesioned အထီး, LiCl ချက်ချင်းအောက်ပါမိတ်လိုက် (Sham-LiCl နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်-LiCl) ကိုလက်ခံရရှိ နှင့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်-ဆား) ။ အေးစက်နေ့က 1 တွင်, တိရိစ္ဆာန်များတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့် 20M LiCl သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေတစ်ဦး 0.15ml / ကီလိုဂရမ်ထိုးနှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါတစ်မိနစ်အတွင်းထိုးသွင်းပြီးတော့နောက်ကျောကသူတို့အိမ်ပြန်လှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ အေးစက်နေ့က2ပေါ်တွင်နံနက်မှာတော့အားလုံးယောက်ျားအလေးချိန်နှင့် LiCl အေးစက်တိရိစ္ဆာန်များဆားတစ်ဦးနှင့်ညီမျှထိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြစဉ်ဆားအေးစက်တိရစ္ဆာန်များ, 20M LiCl တစ် 0.15ml / ကီလိုဂရမ်ထိုးပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ပါရာဒိုင်းတစ်ဆယ်ပြည့်စုံအေးစက်အစည်းအဝေးများစုစုပေါင်းနှစ်ဆယ်ရက်ဆက်တိုက်ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parameters တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ပြသကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ကွာခြားချက်များ, ဒါမှမဟုတ်သုက်တစ် 5% အရေးပါမှု Level ဖြင့် Chi-Square ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးတစ်ခုချင်းစီစမ်းဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုဆို parameter သည်အတွက် Sham-ဆားနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်-ဆားအုပ်စုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, ထိုအုပ်စုနှစ်စုစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြပြီးကတည်းက (ဎ = 9) နှင့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်-LiCl ဒါမှမဟုတ် Sham-LiCl အုပ်စုသည်ဖြစ်စေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တစျခုတစ်ပတ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းမှောင်မိုက်ကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက်4နာရီစတင်ခဲ့သည်။ အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးယန္တရားတစ်ခုကြားနေစင်တာအခန်းထဲကအတူသုံးအိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့ partitioned ခဲ့သည်။ အခနျးတစျခုအခြမ်းအဖြူနံရံများနှင့်တစ်ဦးဇယားကွက်အခင်းခဲ့တဘက်ခင်းအဖြစ်သံမဏိချောင်းတွေနှင့်အတူအနက်ရောင်စဉ်, ဗဟိုအခန်းထဲက Plexiglas အခင်း (Med Associates မှ, စိန့် Albans, VT) နဲ့မီးခိုးရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအေးစက်စတင်ခဲ့ပြီးရှေ့တော်၌ Pre-စမ်းသပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းများအတွက်သဘာဝ preference ကိုတည်ထောင်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်ပထမဦးစွာ, ရှိသမျှတိရိစ္ဆာန်များတဆယ်မိနစ်အားလုံးအခန်းများအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူဗဟိုခနျးထဲသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခန်းသုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့တွင်, ဆိုလိုသည်မှာအေးစက်နေ့က 1, အထီးသူတို့ချက်ချင်းအခြားအခန်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲသုံးဆယ်မိနစ်များအတွက်ကနဦး Non-နှစ်သက်သောခနျးထဲသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ဘို့မိမိတို့ပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်ခနျးထဲသို့ချထားခဲ့ပြီးသောအပျေါမှာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲသုံးဆယ်မိနစ်။ ဒုတိယအေးစက်နေ့ရက်တွင်, အထီးဆန့်ကျင်ဘက်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်အေးစက်ပါရာဒိုင်းတခါပိုပြီးထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ နောက်နေ့တွင်တစ် Post-စမ်းသပ် pre-စမ်းသပ်ဖို့လုပျထုံးလုပျနညျးတူညီခဲ့ကြောင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကိုသီးခြားတန်ဖိုးများ mPFC lesioned လျှင်တိရိစ္ဆာန်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်လိင်တစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးရမှတ်ပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းကုန်သည့်အချိန်နှင့်အစပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းကုန်သည့်အချိန်အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြားနားချက်ရမှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ preference ကိုရမှတ်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းသုံးစွဲအချိန်ကိုပေါင်းစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းကုန်သည့်အချိန်အားဖြင့်ခွဲဝေပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းကုန်သည့်အချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ် 5% အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတွဲကျောင်းသား t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး Pre-စမ်းသပ်မှုနဲ့ post စမ်းသပ်မှုများအကြားတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ (ယခင်လေ့လာမှုများကြံ့ခိုင်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများတွင်မိတ်လိုက်ရလဒ်များကိုဒီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကြောင်းသရုပ်ပြကြနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကုသ preference ကိုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်ပါဘူး27-29).
လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်အတုအယောင်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တစျခုတစ်ပတ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းအလင်းကိုကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက်4နာရီစတင်ခဲ့သည်။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ CPP ကယန္တရားကို အသုံးပြု. LiCl သို့မဟုတ်ဆားဆေးထိုးတဲ့တန်ပြန်မျှမျှတတထုံးစံ၌နှစျခုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းအသီးသီးပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်သို့မဟုတ် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကအတူတွဲခဲ့ကြသည်။ 5% အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတွဲကျောင်းသား t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အကျူးနဲ့ post စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
4% paraformaldehyde နှင့်ဦးနှောက် (coroner) sectioned ခဲ့ကြသည်နှင့်အတူကိုတွေ့ရှိရပါသည်စိစစ်အတည်ပြုတိရစ္ဆာန်များအဘို့ transcardially perfused ခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများတို့ NeuN အသိအမှတ်ပြုပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက် (monoclonal Anti-NeuN antiserum; 1: 10,000; Chemicon) တွင်အဓိက antiserum သုံးပြီးအာရုံခံအမှတ်အသား NeuN များအတွက် immunoprocessed နှင့်စံ immunoperoxidase နည်းလမ်းများ (19) ။ အဆိုပါ ibotenic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏တည်နေရာနဲ့အရွယ်အစား NeuN အာရုံခံဆဲလျအစွန်းအထင်းမှုကပ်လျက် mPFC ကဏ္ဍများအတွက်ဧရိယာခွဲခြားစိတ်ဖြာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ mPFC ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့် (bregma မှ + 4.85 ဆွေမျိုးမှအေပီသတင်းဌာန + 1.70 ကနေအကွာအဝေးသရုပ်ဆောင်ပုံ 1A-C မှာ) ။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဟာ IL ၏ 100% ပါလျှင်ပြီးပြည့်စုံသောစဉ်းစားခဲ့ကြနှင့် PL ၏ 80% ဖကျြဆီးခံခဲ့ရနှင့်ပြည့်စုံကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူသာတိရိစ္ဆာန်များစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (လိင်အပြုအမူကိုစမ်းသပ်မှု, တွေ့ရှိရပါသည်ဎ = 11, အတုအယောင်ဎ = 12 တွင်ထည့်သွင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, EPM စမ်းသပ်မှု, တွေ့ရှိရပါသည်ဎ = 5, အတုအယောင်ဎ = 4; Conditions ရာအရပျ preference ကိုစမ်းသပ်မှု, တွေ့ရှိရပါသည်ဎ = 4; လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်စမ်းသပ်မှု, အတုအယောင်-ဆားဎ = 9, အတုအယောင်-LiCl ဎ = 5, တွေ့ရှိရပါသည်-ဆားဎ = 12, တွေ့ရှိရပါသည်-LiCl ဎ =5အေးစက် ; Conditions ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်စမ်းသပ်မှု, အတုအယောင်ဎ = 12, တွေ့ရှိရပါသည်ဎ = 9) ။
အဆိုပါ mPFC မှတဆင့် Coronal အပိုင်းတစ်) သိထားပုံဆွဲအားလုံးကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အထွေထွေတည်နေရာသရုပ်ဖော် (45) ။ ကိုယ်စားလှယ်အတုအယောင်၏ NeuN များအတွက်စွန်း Coronal အပိုင်း (ခ) ၏ B-C) ​​ပုံများနှင့်တွေ့ရှိရပါသည် (C) တိရိစ္ဆာန်။ မြှား၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ (နောက်ထပ် …)
PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (ကြိုတင်ခွဲစိတ်ဖို့လိင်ရင်တော့မှားမယ်ဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားအတွက်စမ်းသပ်ပြီးမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည်မထိခိုက်ခဲ့ပါပုံ 1D-F ကို) ။ သဘောတူညီချက်မှာတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်မရှိသက်ရောက်မှု (ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ LiCl ၏တွဲဖက်မှုမှဤအရပ်, ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း, ထိုအေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်စမ်းသပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းစားပွဲတင် 1) ။ ထို့ကွောငျ့, PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏လွတ်လပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်း၏ပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း (M) mount မှ (စက္ကန့်) latency, intromission (IM) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (Ej) အတုအယောင်အတွက် (ဎ = 13) နှင့် PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီး (ဎ = 16) ။ PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဆို parameter သည်မထိခိုက်ခဲ့ပါ (နောက်ထပ် …)
ဓာတ်လှေကား Plus အားဝင်္
ကြိုတင်အစီရင်ခံစာများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာ27-29), mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ယောက်ျားနှင့်အတူအထီးကြွက် (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ EPM များ၏ပွင့်လင်းလက်နက်သို့ပိုပြီး entries တွေကိုပြသပုံ 1G), mPFC function ကိုအန္တရာယ်အကဲဖြတ်လိုအပ်ကြောင်းအခြေအနေများများအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြု။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် LiCl အေးစက်၏ဆိုးကျိုးများ
LiCl အေးစက်အတုအယောင်ဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတောင်ပေါ်ပြသကြောင်းအတုအယောင်ယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း၏လျှော့ချရေး, intromissions, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်မှု (ပုံ 2A-B က) ။ သို့သော် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လုံးဝ LiCl အေးစက်ကြောင့်တားစီးပိတ်ဆို့။ chi-စတုရန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တောင်ပေါ်ပြသကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှားပုံ 2Aရန်တူညီဒေတာ;), intromissions (မပြသ ပုံ 2A), သို့မဟုတ်သုက် (ပုံ 2B) ။ အထူးသ mount ကိုပြသကြောင်းယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း, intromissions, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ် Sham တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတ်ရည်ထိပေါ် LiCl အေးစက်တစ်ဦးနှောင့်အယှက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း, ဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (Sham နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်) ကိုနှိုင်းယှဉ် Sham-LiCl အုပ်စုတွင်သိသာထင်ရှားစွာနိမ့်ခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, LiCl အေးစက်မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှု (တွေ့ရှိရပါသည်-LiCl ယောက်ျားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိန်းဂဏန်းများ 2A-B က) ။ ထို့ကြောင့် mPFC function ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခွအေနေတားစီး၏ဝယ်ယူဘို့အရေးကြီးသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကိုစမျးသပျခဲ့သညျ၏ဝယ်ယူအပေါ် PL / IL ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သီးခြားလေ့လာမှုဆိုးကျိုးများအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု attenuate တာဖြစ်နိုင်တယ်။
က) တောင်ပေါ်သို့မဟုတ်ခကိုပြသသောတိရစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်း) အတုအယောင်သို့မဟုတ် PL / IL ယောက်ျား - ကြွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက် 10 စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့် copulation ဆက်ပြောပါတယ်ကန့်သတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်း ejaculated ။ * အတုအယောင် LiCl အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (p <0.05) ဖော်ပြသည် (နောက်ထပ် …)
Post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးတိုးလာခြားနားချက်ရမှတ်များနှင့် preference ကိုရမှတ်များကညွှန်ပြအဖြစ် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲ Contextual တွေကိုပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုပြသပုံ 3A-B က) ။ ထို့အပွငျကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပို့စ်စမ်းသပ်မှု (စဉ်အတွင်းခြားနားချက်နှင့် preference ကိုရမှတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှောက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ LiCl-သွေးဆောင်အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်နှင့်အတူဆက်စပ်တွေကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု, မထိခိုက်ခဲ့ပါပုံ 3C-D ကို).
PL / IL lesioned ကြွက်များတွင် pretest နှင့် posttest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ကို C) ​​ဦးစားပေးရမှတ်။ * = p = 0.01 pretest နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အတွက်တွဲအခန်းထဲကအနုတ်အချိန်အတွက်အချိန် (စက္ကန့်) အဖြစ်တွက်ချက်ဃ) Difference ရမှတ် (နောက်ထပ် …)
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ mPFC ၏ IL နှင့် PL ဒေသကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး, မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူမထိခိုက်ဘူးကသတင်းပို့သည်။ အဲဒီအစားကိုတွေ့ရှိရပါသည် conditional လိင်-ခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏ဝယ်ယူတားဆီး။ ဤရလဒ်သည်သပ္ပါယ်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်စွမ်းသည့် mPFC ၏ IL နှင့် PL ငျဒသေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သောအယူအဆများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေယခင်ဒေတာ (mPFC အာရုံခံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ20) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုအတွက် mPFC lesioned ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆန်းစစ် parameters များကိုမဆိုအတွက်အတုအယောင်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ကြိုတင်အစီရင်ခံစာများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာ30, 32ဓါတ်လှေကားပေါင်းဝင်္အပေါ်စွမ်းဆောင်မှုများကအကဲဖြတ်ကဲ့သို့) mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိရပါသည် protocol ကိုထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, anxiolytic သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ကိုပြု၏။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း mPFC အတွင်း IL နှင့် PL subdivisions ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပုံမှန်စကားရပ်ဘို့မလိုအပ်ပါဘူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, Agmo နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကယခင်လေ့လာမှုကို (anterior cingulate ဧရိယာ (ACA) ၏တွေ့ရှိရပါသည်တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် copulated ကြောင့်ယောက်ျားများ၏ရာခိုင်နှုန်းလျော့ချကြောင်းသရုပ်ပြ25) ။ ဒါကြောင့်ဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်တစ်ချိန်က IL နှင့် PL ဒေသများအပြုအမူ၏တားစီးဖျန်ဖြေနေစဉ် ACA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ပုံစံအမျိုးမျိုးနှောင့်အယှက်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်လည်း (33, 34), ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံအပြုအမူတားစီးပေါ် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုသင်ယူမှုလိုငွေပြမှုမှ ascribed မရနိုင်ပါ။ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကသီးခြားအစုများတွင် mPFC lesioned ယောက်ျားလိင်အပြုအမူတစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကိုတည်ထောင်ရန်စွမ်းရည်များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤအအထီးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တွဲအခန်းထဲသို့တစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဖြစ်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု mPFC lesioned တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျန်ရှိတော့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် CPP ကသွေးဆောင် psychostimulant များ၏ဝယ်ယူများအတွက် PL သို့မဟုတ်ပြည့်စုံ mPFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ယခင်လေ့လာမှုများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏35, 36PFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏ဝယ်ယူတားဆီးမယခင်အစီရင်ခံစာများ (နှင့်ကိုက်ညီ LiCl mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သင်ယူ), ထို့အပွငျ, အသင်းအဖွဲ့များ,34) ။ စုပေါင်းသည်ဤဒေတာ (ထို mPFC အတွင်း PL / IL subdivisions ၏ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိ activation အကြံပြု20) ဆုလာဘ် related ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု၏ဝယ်ယူဘို့မလိုအပ်နေကြသည်ကအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများသေဒဏ်စီရင်ဖို့ပြောပြတယ်အဖြစ်သို့သော်ဤအချက်အလက်များ၏လျော်သောအသုံးချဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအယူအဆ (နဂိုအတိုင်း IL function ကိုအကျိုးကို-ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တငျပွထားတဲ့ inhibitory နှင့် excitatory သွင်းအားစုအပျေါမှာလေ့လာများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောကြောင်းလက်ရှိတွေ့နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏37) ။ PL နှင့်အတူထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များ (35) သို့မဟုတ် IL (8, 37, 38) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်ဤအချက်အလက်အသုံးချတစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းသာမန်သုဉ်းသင်ယူမှုဖော်ပြရန်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ၎င်းတို့၏အပြုအမူ၏ဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းများပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ၏မျက်နှာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များရှာဖိနှိပ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သော။ ညွှန်ပြ လူသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထသိမြင်-စိတ်ခံစားမှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ hedonic ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေး (အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လုံလောက်သောလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်မထွက်ရရှုပ်ထွေးပြီးအတွေ့အကြုံ39) ။ လက်ရှိဒေတာ mPFC ကမောက်ကမဖြစ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများရှာကြံ compulsive မှအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, mPFC ကမောက်ကမဖြစ်မှု (တော်တော်များများစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်13, 40) ကို mPFC ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုအခြားရောဂါများနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကတခြားရောဂါများနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ shared ကြောင်းတစ်ခုအခြေခံရောဂါဗေဒဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း။ အမှန်စင်စစ်လူသားအတွက် hypersexuality သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ((ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်မမှန်အပါအဝင်) စိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်အတူ comorbidity ၏မြင့်မားသောပျံ့နှံ့ရှိသည်ဖို့အစီရင်ခံထားသည်41), နှင့် approximately10% အတူတကွ compulsive ဝယ်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ပျံ့နှံ့, လောင်းကစားနှင့်အစာစားခြင်း (42-44).
1. သိမှု arousal Enhance နိုင်ပါစေဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးက Feedforward တိုက်နယ်: Huang က H ကို, Ghosh P ကို, ဗန်တွင်း Pol အေ Prefrontal Cortex-ထုတ်လုပ်တဲ့ Glutamatergic Thalamic Paraventricular နျူကလိယစိတ်လှုပ်ရှားမှု Hypocretin ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2005;95: 1656-1668 ။ [PubMed]
2. Floresco SB, Braaksma: D, Phillips က AG က။ တစ်ဦးဟာ radial လက်မောင်းဝင်္အပေါ်တုံ့ပြန်နှောင့်နှေးနေစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင် Thalamic-cortical-striatal circuitry subserves ။ J ကို neuroscience ။ 1999;24: 11061-11071 ။ [PubMed]
3. Christakou တစ်ဦးက, Robbins TW, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်များကိုထိခိုက် Modulation အတွက်ပါဝင် Everitt ခ Prefrontal cortical-Ventral Striatal ဆက်သွယ်မှု: Corticostriatal တိုက်နယ်ရာထူးအမည်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2004;4: 773-780 ။ [PubMed]
4. က Wall P ကို, Flinn J ကို, Messier C. Infralimbic muscarinic M1 receptors ကြွက်တွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ် modulate ။ Psychopharmacology ။ 2001;155: 58-68 ။ [PubMed]
5. နားမှာ ABK, Vythilingam M က, စီးပွားရေး S ကို, တိုနီဘလဲ R. တုံ့ပြန်မှု options နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ချက်များ: dorsal နှင့် rostral anterior cingulate cortex ၏ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍ။ NeuroImage ။ 2007;35: 979-988 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6. ရော်ဂျာ R ကို, Ramanani N ကို, Mackay ကို C, Wilson က J ကို, Jezzard P ကို, Carter ကနေ C, စမစ်သည် SM ။ anterior Cingulate Cortex နှင့် Medial Prefrontal Cortex ၏ကွဲပြားသောအဘို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်-Making သိမှတ်ခံစားမှု၏သီးခြားအဆင့်အတွက်ဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းများက activated နေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004: 55 ။
7. Miller က ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2001;24: 167-202 ။ [PubMed]
8. Quirk, G, Russo GK, Barron J ကို, Lebron K. ငြိမ်းအေးကြောက်လန့်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် Ventromedial Prefrontal Cortex ၏အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 2000;16: 6225-6231 ။ [PubMed]
9. Dickinson အေလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလေ့အထများ: အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond SER B ကို Biol သိပ္ပံ။ 1985;308: 67-78 ။
10 ။ Gehring WJ, နိုက် RT ကို။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် Prefrontal-cingulate interaction က။ နတ် neuroscience ။ 2000;3: 516-520 ။ [PubMed]
11 ။ Dalley J ကို, Cardinal R ကို, Robbins တီ Prefrontal အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်ကြွက်များတွင်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အာရုံကြောနှင့် neurochemical အလွှာဟာ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2004;28: 771-784 ။ [PubMed]
12 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1481-1489 ။ [PubMed]
13 ။ Graybiel လေး, Rauch SL ။ obsessive-compulsive ရောဂါတစ် neurobiology ဆီသို့။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000;28: 343-347 ။ [PubMed]
14 ။ Reuter JRT, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005;8: 147-148 ။
15 ။ Robbins TW, Everitt BJ ။ Limbic-striatal မှတ်ဉာဏ်စနစ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2002;78: 625-636 ။ [PubMed]
16 ။ Pfaus JG, Kippin TE, Centeno အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001;2: 291-321 ။ [PubMed]
17 ။ Agmo အေသုတ်ရည်ထိ-ဆက်ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှိအေးစက်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုနှစ်ခုအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002;77: 425-435 ။ [PubMed]
18 ။ ပီတာ RH အ။ အထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူဖို့ဆန္ဒရှိသင်ယူခဲ့တယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1983;97: 140-145 ။ [PubMed]
19 ။ ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 718-730 ။ [PubMed]
20 ။ ME Balfour, Brown က JL, ယု L ကို, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါအာရုံကြော activation မှ medial prefrontal cortex ကနေ efferents ၏အလားအလာပံ့ပိုးမှုများကို။ neuroscience ။ 2006;137: 1259-1276 ။ [PubMed]
21 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez M က, ဂွေဗားရားတစ်ဦးက, Morali, G, စေရ်ဗန်းတေ့အမ် Subcortical အကွိမျမြားစှာယူနစ်လုပ်ဆောင်ချက်အပြောင်းအလဲများ Rat အမျိုးသားလိင်အပြုအမူစဉ်အတွင်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1997;61(2): 285-291 ။ [PubMed]
22 ။ Hendrick SE, Scheetz HA ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေအတွက် hypothalamic အဆောက်အဦများ၏ interaction ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1973;10: 711-716 ။ [PubMed]
23 ။ Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1991;105: 727-743 ။ [PubMed]
24 ။ လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် sciatic အာရုံကြော ligature ၏ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti တစ်ဦးက, Omana-Zapata ငါ Lujan M က, အခြေအနေ-Lara အမ်လုပ်ဆောင်ချက်များ: တိုကျရိုကျတိုင် decortication ၏ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994;55: 577-581 ။ [PubMed]
25 ။ Agmo တစ်ဦးက, Villalpando တစ်ဦးက, အ medial prefrontal cortex နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကောက်ယူသူ Z ကို, ဖာနန်ဒက်ဇအိပ်ချ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995;696: 177-186 ။ [PubMed]
26 ။ Karama S က, Lecours AR, Leroux J ကို, Bourgouin P ကို, Beaudoin, G, Joubert က S, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဦးနှောက် Activation ၏ Beauregard အမ်ဒေသများခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုခြင်းစဉ်အတွင်း။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2002;16: 1-13 ။ [PubMed]
27 ။ Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009;55: 93-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် Neuroplasticity ။ Biol psyche ။ 2009 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
29 ။ ဝက်ဘ်က IC, Baltazar RM, ဝမ်က X, အိုး KK, Coolen LM, Lehman MN ။ သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက် Diurnal မူကွဲ, mesolimbic tyrosine hydroxylase, နှင့်အထီးကြွက်များတွင်နာရီဗီဇစကားရပ်။ J ကို Biol Rhythm ။ 2009 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
30 ။ Shah က AA ကို, အ medial prefrontal cortex ၏ Treit ဃ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပုခြီးမွှောကျ-ပေါင်းဝင်္, လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်စမ်းသပ်မှုများမြှုပ်ထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်ကွောကျရှံ့သောတုံ့ပြန်မှု attenuate ။ ဦးနှောက် Res ။ 2003;969: 183-194 ။ [PubMed]
31 ။ Sullivan က RM, ကြွက်များတွင် ventral medial prefrontal cortex ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ Gratton အေအပြုအမူသက်ရောက်မှု hemisphere-မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2002a;927: 69-79 ။ [PubMed]
32 ။ Sullivan က RM, ထိုကြွက်နှင့် psychopathology များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal function ကို၏ Gratton အေ Prefrontal cortical စည်းမျဉ်း: ခြမ်းကိစ္စရပ်များ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002b;27: 99-114 ။ [PubMed]
33 ။ Franklin T က, Druhan JP ။ သည်အထိတစ်ဦးကိုကင်း-Associated ပတ်ဝန်းကျင်ရန် conditional Hyperactivity ၏ဖော်ပြမှုအတွက်နျူကလိယ Accumbens နှင့် Medial Prefrontal Cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2000;23: 633-644 ။ [PubMed]
34 ။ Hernadi ငါ Karadi Z ကို, Vigh J ကို, Petyko Z ကို, Egyed R ကို, Berta B, Conditions အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ Lenard အဆိုအရအယ်လ် ALTER microiontophoretically ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် neurotoxins လျှောက်ထားပြီးနောက်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2000;53: 751-758 ။ [PubMed]
35 ။ Zavala တစ်ဦးက, Weber က S, ဆန် H ကို, Alleweireldt တစ်ဦးက, Neisewander JL ။ ဝယ်ယူ, မျိုးသုဉ်းနှင့်ကိုကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကို၏ reinstatement အတွက် medial prefrontal cortex ၏ prelimbic မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း၏အခန်းက္ပ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2003;990: 157-164 ။ [PubMed]
36 ။ Tzschentke TM, ကြွက် medial prefrontal cortex ၏ Schmidt ကဒဗလျူ Functional သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော: မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုများနှင့်အမူအကျင့်ာင်းအပေါ် discrete subarea-တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999;11: 4099-4109 ။ [PubMed]
37 ။ Rhodes SE, Killcross AS ။ တစ်ဦး Pavlovian conditional တားစီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်လေ့ကျင့်ရေးအောက်ပါနှောင့်အယှက်ဉာဏ်ရည်မမီပေမယ့်ပုံမှန် summation စမ်းသပ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကြွက် infralimbic cortex ရလဒ်၏ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;9: 2654-2660 ။ [PubMed]
38 ။ Rhodes SE, ကြွက် infralimbic cortex ၏ Killcross အက်စ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အနေနဲ့အစာစားချင်စိတ် Pavlovian တုံ့ပြန်မှုပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့် reinstatement မြှင့်တင်ရန်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2004;5: 611-616 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Stoleru ကို S, Gregoire MC, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး, Cinotti L ကို, Lavenne က F, Le: D, Vernet-Maury အီး, Rada H ကို, Collet ကို C, Mazoyer B ကို, သစ်တော MG, Magnin က F, Spira တစ်ဦးက, Comar D ကိုဘား ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1999;28: 1-21 ။ [PubMed]
40 ။ တေလာ SF, Liberzon ငါနှစ်ထပ် LR, Koeppe RA ။ schizophrenia အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှု။ Schizophrenia Res ။ 2002;58: 159-172 ။
41 ။ "ထိန်းချုပ်ထဲက" ကြောင်း Bancroft ဂျေလိင်အပြုအမူ: တစ်သီအိုရီအယူအဆချဉ်းကပ်နည်း။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2008;31(4): 593-601 ။ [PubMed]
42 ။ Weintraub MD ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Dopamine နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်။ Neurol Annals ။ 2008;64: S93-100 ။
43 ။ et al Isaias IU သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Impulse နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ကြားဆက်ဆံရေး။ လပ်ြရြားမြ Disorders ။ 2008;23: 411-415 ။ [PubMed]
44 ။ Wolters EC ။ အဆိုပါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-compulsive ရောင်စဉ်တန်းများကိုပါကင်ဆန်ရောဂါ-related မမှန်။ J ကို Neurol ။ 2008;255: 48-56 ။ [PubMed]
45 ။ Swanson LW ။ ဦးနှောက် Maps ကို: အ Rat ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ Elsevier; အမ်စတာဒမ်: 1998 ။